Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Dib u soo kabashada safarka xagaaga ee Yurub ayaa fashilmay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • France Breaking News • Wararka Giriigga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dalalka ugu liitay waxay ahaayeen kuwa ku tiirsan dalxiiska dheer, sida Faransiiska iyo Talyaaniga iyo kuwa soo rogay xayiraadaha safarka ee ugu qallafsan sida UK, oo liidatay meesha ugu hooseysa liiska, oo gaadhay 14.3% Heerarka 2019.
Socdaalka hawada xagaaga ee Yurub wuxuu gaaray 39.9% heerka cudurka faafa ka hor.
Sawirka ayaa ahaa mid isku dhafan, iyadoo meelaha loo socdo qaarkood ay ka fiicnaayeen kuwa kale.
Ballan -qabsiga ayaa hoos loo dhigay dhammaadka xilliga xagaaga.
Cilmi-baaris cusub ayaa muujineysa in duullimaadyada caalamiga ah ee tagaya meelaha Yurub bilihii Luuliyo iyo Ogosto ay gaareen 39.9% heerarkii cudurka faafa ka hor. Tani aad bay uga fiican tahay sanadkii hore (oo ahayd 26.6%), markii masiibada COVID-19 ay sababtay qufullo baahsan; iyo tallaalada weli lama ansixin.
Si kastaba ha ahaatee, sawirka ayaa ahaa mid aad u kala duwan, iyadoo meelaha qaarkood ay aad uga fiicnaayeen kuwa kale. Sidoo kale, rajadu ma hagaagayso, maadaama ballansashada ay hoos u dhacday dhammaadka xilliga xagaaga.
Markaad eegto waxqabadka waddan ahaan, Greece waxay ahayd mid taagan. Waxay gaartay 86% bishii Luulyo iyo Ogosto ee yimid 2019. Waxaa ku xigay Qubrus, oo gaadhay 64.5%, Turkey, 62.0% iyo Iceland, 61.8%. Giriiga iyo Iceland waxay ka mid ahaayeen dalalkii ugu horreeyay ee si weyn u baahiyay sheegashooyinka inay aqbali doonaan booqdayaasha si buuxda loo tallaalay iyo/ama tusi kara tijaabo PCR oo taban iyo/ama muujin kara caddeyn ka soo kabashada COVID-19.
Dalalka ugu liitay waxay ahaayeen kuwa ku tiirsan dalxiiska dheer, sida Faransiiska iyo Talyaaniga iyo kuwa soo rogay xannibaadaha safarka ee ugu qallafsan sida UK, kaas oo liita liiska ugu hooseeya, oo gaadhay 14.3% kaliya heerarka 2019.
Marka laga reebo kuwa sida qaaliga ah u raaca, duulimaadyada Yurub dhexdeeda ah ayaa ahaa 71.4% dadka yimid, marka la barbardhigo 57.1% sannadka 2019. Qaraabada la waayo dadka soo booqda muddada dheer, kuwaas oo sida caadiga ah sii dheeraada, wax badan kharash gareeya oo diiradda saara magaalooyinka iyo dalxiiska, ayaa ayaa hoosta ka xarriiqay darajooyinka meelaha ugu wanaagsan uguna liita meelaha deegaanka.
Socdaalkii London ayaa si gaar ah u niyad jabiyay; waxay ahayd meesha ugu hooseysa liiska magaalooyinka ugu mashquulka badan Yurub, iyagoo gaadhay 14.2% oo keliya dadka yimid 2019. Liiskaas waxaa madax u ahaa Palma Mallorca, oo sidoo kale ah goob weyn oo loo tamashle tago xeebta, oo gaartay 71.5% heerarka 2019 iyo Athens, oo ah marin u ah jasiirado badan oo ku yaal Adriatic, 70.2%. Magaalooyinka waaweyn ee ugu waxqabadka wanaagsan waxay ahaayeen Istanbul, 56.5%, Lisbon, 43.5%, Madrid, 42.4%, Paris, 31.2%, Barcelona, ​​31.1%, Amsterdam, 30.7%iyo Rome, 24.2%.
Marka la barbardhigo, goobaha firaaqada waxay caddeeyeen inay aad u adkaysi badan yihiin. Darajaynta dhammaan meelaha waawayn ee maxalliga ah (tusaale ahaan: kuwa leh saamiga suuqa in ka badan 1%) waxaa xukuma goobaha fasaxa ee xeebta dhaqameedka ama albaabka iyaga. Hoggaamiyayaashu waxay ahaayeen Heraklion iyo Antalya, kuwaas oo dhaafey heerarkii cudurka faafa kahor 5.8% iyo 0.5% siday u kala horreeyaan. Waxaa ku xigay Thessaloniki, 98.3%; Ibiza, 91.8%; Larnaca, 73.7% iyo Palma Mallorca, 72.5%.
Marka laga soo tago isbeddellada macro -ga, meelaha qaarkood waxay u fiicnaadeen ama ka sii liiteen sababo badan oo gudaha ah. Tusaale ahaan, Boortaqiiska, oo ah meesha ay jecel yihiin dadka dalxiisayaasha ah ee UK, waxay la kulmeen markii Boqortooyada Midowday ay beddeshay magacii cagaar -cagaar ilaa june; iyo Spain ayaa dhibtay dhammaadkii Luulyo markii Jarmalku ka digay dhammaan safarka aan muhiimka ahayn.
Marka la tixgeliyo sida arrimuhu uga xun yihiin dalxiiskii Yurub sannadkii hore, xagaagan wuxuu ahaa sheeko soo kabasho aad u suubban. Tixraacyada ka dhanka ah waqtiyada caadiga ah, xoojinta hoose ee socdaalka hawada caalamiga ah, in ka yar 40% ee caadiga ah, ayaa aad u dhaawacay warshadaha duulista. Maqnaanshaha joogtada ah ee socotada dhaadheer, gaar ahaan Bariga Fog (waxay gaartay kaliya 2.5% mugga kahortagga masiibada xagaaga) waxay dhabar jab weyn ku noqon doontaa dhaqaalaha booqdaha ee dhowr dal oo Yurub ah.
Haddii ay jirto qayb ka mid ah raaxada, waa dadka “joogitaanka”, tusaale ahaan: inay fasax ku qaataan dalkooda. In kasta oo duullimaadyada gudaha ay leeyihiin saamiga dadka laga tirada badan yahay ee suuqyada Yurub xilliyadii caadiga ahaa, haddana aad bay u sii fiicnaatay intii lagu jiray masiibada maxaa yeelay lama soo marin xayiraadaha safarka ee adag. Tusaale ahaan, Canaries iyo Balearics waxay soo dhoweeyeen booqdayaal Isbaanish ah oo ka badan inta ay soo dhaweeyaan xilli caadi ah.